साइबेरियन चिप्मङ्क (फोटो)। घरमा चिप्मङ्क
यो घरमा धेरै लोकप्रिय सामग्री विदेशी जनावर भएको छ। यी मध्ये एक थप हालै domesticated थियो, तर पहिले नै प्रेम र स्नेह अरूबाट कमाएको छ साइबेरियन चिप्मङ्क छ। यी अद्भुत जनावर बाहेक एक आकर्षक उपस्थिति, अझै पनि धेरै रोचक आफ्नो व्यवहार र गतिविधि पालन गर्न छ। तर, यो domesticated chipmunks राम्रो हार्ड, त्यसैले तपाईं आफैलाई यस्तो पाल्तु जनावर फेला पार्न निर्णय भने, तपाईं आफ्नो सामग्रीहरू सबै विवरण थाहा हुनुपर्छ, र तिनीहरूले विश्वास मलाई, धेरै।
वासस्थानमा र विशेष गरी अस्तित्व
Squirrels - एक कृंसम्म, जो लोखर्के परिवार हौं। तिनीहरूले अपवाद चीन र युरोप बसाबास गर्नु जो केवल साइबेरियन वा एशियाली छ, उत्तर अमेरिका मा मुख्य रूप बाँचिरहेका छौं। सबैभन्दा भाग लागि तिनीहरूले earthen burrows वा रूखहरू मुनि, खुला वन बस्ने, तर तिनीहरू खतरा महसुस हुँदा र एक रूख चढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ। चिप्मङ्क प्रेम एकान्त, त्यसैले कैद प्रत्येक पशु आफ्नै कक्षहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ। 5-6 वर्ष, तर उचित हेरविचार र उचित पोषण पशु संग 10 वर्ष बाँचे गर्दा पटक थिए - साइबेरियन चिप्मङ्क, जो तपाईं यस लेखमा, जंगली मा, देख्न सक्नुहुन्छ3वर्ष, र कैद फोटो बसोबास। को जाडो समयमा तिनीहरूले सामान्यतया सीतनिद्रा, तर तिनीहरूले अन्य जनावर फरक तिनीहरूले उठ सक्नुहुन्छ restock, र त्यो मा, फेरि निदाउँछन् गर्न।
विवरण साइबेरियन चिप्मङ्क
यो धेरै सानो लोखर्के जस्तै देखिन्छ कि एउटा सानो जनावर हो। उहाँले एक आकर्षक कोट र एक लामो bushy पुच्छर एकदम छ। ऊन आवरण सामान्यतया तन वा खैरो पाँच विशिष्ट कालो धर्काहरू संग। शारीरिक लम्बाइ साइबेरियन चिप्मङ्क - 13-19 सेमी, पुच्छर लम्बाइ - बारे 70-110 G पुच्छर को एक शरीरको वजन संग 12.8 सेमी लामो र बाक्लो कपाल ढाकिएको छ। जनावर एक कठोर ऊन आवरण छ। एशियाई chipmunks एक विशेषता सुविधा धेरै प्यारा गालामा pouches छन्।
यस प्रकारको प्रतिनिधिको ज्यादातर diurnal छन्। यो पनि जंगली मा, मान्छे रुचि हो जो धेरै, सुरुचिपूर्ण ऊर्जावान, उत्सुक र भरोसा मुसा छ। चिप्मङ्क - धेरै चिटिक्क र सुग्घर प्राणी, जो, केही समस्या ल्याउन तथापि, र आनन्द धेरै ल्याउँछ हुनत। पनि घरमा एक चिप्मङ्क धेरै उत्सुक छ, त्यसैले यो उपेक्षित भएको पिंजरे बाहिर कृंसम्म उत्पादन सिफारिश छैन कि भूल छैन।
ख्याल र मर्मतसम्भारको unpretentious यी विदेशी पाल्तु जनावर। तिनीहरूले मुसा को घर को बाँकी फरक भनी देखि वस्तुतः कुनै गंध, जस्तै, उदाहरणका लागि, चूहहरुमा वा hamsters को हात बाट। यो, को पाठ्यक्रम, धेरै सजिलो तिनीहरूलाई हेरचाह गर्न। कैद द्वारा तिनीहरूले राम्रो चाँडै र painlessly प्रयोग प्राप्त। तपाईं आफैलाई यस्तो पाल्तु जनावर फेला पार्न निर्णय भने उहाँले सहज र उहाँलाई लागि सुरक्षित महसुस भनेर सबै आवश्यक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
पहिलो, तपाईंले एक उपयुक्त पिंजरे किन्न आवश्यक छ। Chipmunks (घर) धेरै चलाउन मन छ, त्यसैले तिनीहरू ठूलो सेल आकार आवश्यक -। लगभग 100 × 50 × 60 सेमी यो धातु हुन र खण्डहरू एक अधिकता हुनुपर्छ। यो पनि चलिरहेको लागि पाङ्ग्रा र जहाँ चिप्मङ्क सुतिरहेको छ घर राख्न सिफारिस गरिएको छ। को पिंजरे twigs र ड्रिफ्टहुड राखिएको हुनुपर्छ निश्चित हुनुहोस्। फोहर फाल्न sawdust सिफारिस, तर पनि घास, वा पीट बनेको गर्न सकिन्छ। समय समयमा रिजर्व घरमा आवश्यकता सफा, तर यो एक चिप्मङ्क धेरै दुखी हुन सक्छ रूपमा बाहिर सबै एकैचोटि फेंक आवश्यक छैन।
पशु सामग्रीको Subtleties
सेल देखि चिप्मङ्क जनावर पहिलो प्रयोग प्राप्त गर्नुपर्छ सिफारिस गरिएको छैन, तुरुन्त जारी, तर हप्ता को एक जोडी पछि तपाईंले पहिले नै उसलाई घर वरिपरि हिंड्न सिकाउन सक्छ। तथापि, रूपमा मात्र नजिक पर्यवेक्षण अन्तर्गत माथि सानो उल्लेख गरे। केवल दिनमा जनावर सक्रिय भएकाले राति उहाँले तपाईंलाई चिन्ता छैन। Squirrels पाल्तु जनावर निष्क्रिय झूठ छैन, तिनीहरू केवल सुस्त र कम सक्रिय बन्न पनि हिउँदमा छन्। कुनै पनि मामला मा पाल्तु जनावर बाधा गर्न सक्दैन वा तर्साउने काम यस समयमा, फलस्वरूप, यो आक्रामक बन्न सक्छ। हामी पहिले देखि नै साइबेरियन चिप्मङ्क राम्रो द्रुत मानिसलाई accustomed पाइहाल्छन् कि उल्लेख गरेको छ, उहाँले अन्ततः हातमा देखि खाना लिन सुरु, त्यसैले तपाईं तुरुन्तै रत्तीएको पाल्तु जनावर गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो भोजन छ प्रयोग गर्नुहोस्।
आहार साइबेरियन चिप्मङ्क
यो कृंसम्म खाने द्वारा unpretentious छ। घरमा चिप्मङ्क लगभग सबै चिरपरिचित अनाज प्रयोग गर्दछ। निस्सन्देह, सबै को सबै भन्दा उनि पागल (बादाम दिइनेछ हुँदैन!), अनाज, सूर्यमुखी बीउ र स्याउ प्रेम। साथै, यो डेयरी उत्पादन गर्न सकिन्छ: पनीर र दूध। अझै हामी साइबेरियन चिप्मङ्क पूर्ण शाकाहारी छैन कि सम्झना हुनुपर्छ, र यो खाना प्रस्ताव गर्नुपर्छ र जनावर, उदाहरण, कीरा वा लार्वा लागि, तर तपाईं कच्चा मासु एउटा सानो रकम तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। उहाँले मात्र होइन आवश्यक सिट्रस अक्सर खुवाउन, ताजा घाँस, फल, जामुन र तरकारी खान खुसी थियो। , चिप्मङ्क प्लम दिन छैन किनभने आफ्नो हड्डी जनावर खतरनाक छ जो एक पदार्थ समावेश गर्दछ।
को पिंजरे मा सधैं ताजा पानी हुनुपर्छ। यो गर्त स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ त पशु कचौरा, फेंक, बरु धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। Squirrels आफ्नो काट, पीसने cutters को एक चक टुक्रा राख्नु आवश्यक छ। खैर, अब यसलाई सम्भव विशेष सुक्खा खाना किन्न र आहार पाल्तु जनावर विविधता भन्ने सामान्य खाना यसलाई घुमाउन लगभग कुनै पनि स्टोरमा छ।
हामी जनावर (लोखर्के) चरम गर्मी मन छैन सम्झना गर्नुपर्छ, जंगली, यो केवल वसन्त मा, त्यहाँ सुन्दर छ जब, माथि घाम भिजेको सक्छ। तसर्थ, सेल मा एक विशेष darkened यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने लुकाउन सक्छ pet कोठा सिर्जना गर्न आवश्यक छ। वसन्त मा, यो पनि सूर्य आनन्द उठाउँछन् एक कृंसम्म मौका प्रदान गर्न घरमा मनमोहक छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि मिस चिप्मङ्क गरेको पुच्छर जान्न, तपाईं गर्नुपर्छ, छाला धेरै पातलो छ किनभने हो, त्यसैले यो पुच्छर परिणाम जो amputated गर्न छ चोट, गर्न सक्छ। तपाईं जो यो आफ्नो incisors पीसने हुनेछ हालतमा आफ्नो पाल्तु जनावर ठोस भोजन, दिन छैन भने, तिनीहरूले पछि कृंसम्म पनि मर्न सकिन्छ कि यस्तो हदसम्म बढ्न सक्छ कि भूल छैन।
एशियाली (वा साइबेरियन) चिप्मङ्क अपेक्षाकृत हालै domesticated, त्यसैले तपाईं आफ्नो बाइट्स को wary हुनुपर्छ। को पाल्तु जनावर पहिले नै आफ्नो मास्टर गर्न accustomed गर्दा पनि, उहाँले मलाई विश्वास जो, छैन धेरै सुखद छ, अझै पनि दु: ख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफैलाई यस्तो पाल्तु जनावर फेला पार्न निर्णय भने, त्यसपछि माथि विवरण को सबै गर्न होसियार हुन। सानो जनावर जीवनको लागि सही आहार र इष्टतम अवस्था प्रदान गर्न भने, उहाँले एक लामो समय को लागि बस्नेछन् र तपाईं र तपाईंको परिवारलाई प्रसन्न हुनेछ।
खुवाउन भन्दा लक्षण र उपचार,: को निदान बिरालोहरु मा "मधुमेह" को
कुकुर लागि शीर्ष अनाज: पशु चिकित्सकहरु को सल्लाह
के एउटा बिरालो हाछ्युउँ भने?
एक बिरालो पखाला छ भने, उपचार सही हुनुपर्छ
अचम्मको माछा तोते
गर्न सक्छन् एक सुत्केरी आमाले दूध संक्षिप्त र सामान्य मा हुन सक्छ?
कुकीहरू "fagots" - एक नुस्खा। कुकी "fagots" आकृति
एक व्यवहार रूपमा एक वर्ष एउटा बच्चा अप मा रूघाँ? परम्परागत व्यञ्जनहरु
को रुबल को ग्राफिक प्रतिनिधित्व। को रुबल अन्तरराष्ट्रिय पद